အကြင်နာနန်းတော်: အချစ်တို့ ပြန်ပေးပါ..
မင်းလေး မေ့နေတဲ့အချိန် ငါ့မှာ တစ်ယောက်ထဲ လွမ်းဆွတ်လို့ ကြေကွဲ
မင်းနဲ့ဝေးချိန်လေးတွေ မနေတတ်ဘူး သိပ်ချစ်လွန်းလို့ပါ
ပြန်ခဲ့ပါ အချစ်ရယ် . ပြန်ခဲ့ပါ အချစ်ရယ်
မင်း ထားရက်ခဲ့ဖူးတယ် . ငါ့ကို ဘာကြောင့် အကြောင်းပြချက်တွေ မပေး
မုန်းမေ့နိုင်ဖို့တော့ မလွယ်ပါဘူး . သိပ်ချစ်လွန်းလို့ပါ
ရင်ထဲ သိပ်လွမ်းတယ် . ရင်ထဲ သိပ်လွမ်းတယ်၊ ပြန်ခဲ့ကွယ်...
ကြိုနေလင့်ခဲ့ ငါ့ရင်ခွင် မင်းလေးလှမ်းခဲ့ပါ
ခွင့်လွှတ်နေရင်း ငါ့အချစ်တွေ မင်းအတွက် သက်သက်ပါ
ပျော်နေကြတဲ့ ချစ်သူတွေ မင်းလေး တွေ့တဲ့အခါ
သတိရမှာလား မေးတဲ့အခါ . ရင်ထဲက စကားဖြေပါ...
ကြင်နာသူတွေ ပျော်နေချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ အသည်းဟာ ကွဲအက်
မကြင်နာသူ . သူ ဘယ်ဆီမှာ မေ့ပျောက်ထားနိုင်စွမ်းရဲ့
တစ်ချိန်ချိန်မှာ သူပြန်လာမယ် မသိစိတ်ထဲက မျှော်လင့်ဆဲ ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲ
မင်းပေးတဲ့ ပို့စ်ကဒ်လေးတွေ . မင်းပေးတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေ
သတိရတိုင်း ထုတ်ကြည့်မိတာ တဆစ်ဆစ်နဲ့ လွမ်းဆိပ်တက်လာ
ရောက်တဲ့အရပ် မင်းပြန်ခဲ့ပါ၊ ဟိုအရင်လို မင်းရဲ့ အချစ်တို့ ပြန်ပေးပါ...
ပို့စ်ရေးသားသူ ဧကရီ ရက်စွဲ Friday, September 30, 2011